ကျောက်စိမ်း (Jade) – MYANHOUSE
မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့အရည်အသွေးအကောင်းဆုံး ကျောက်စိမ်းထွက်ရှိသည့်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ကျောက်စိမ်းဟု ယေဘုယျအားဖြင့် ခေါ်ဝေါ်သော်လည်း Jadeite (ဂျေဒိုက်) နှင့် Nephrite (နက်ဖရိုက်) ဟူ၍ ကျောက်စိမ်းအမျိုးကွဲနှစ်မျိုးရှိသည်။ အဆိုပါနှစ်မျိုးအနက်မှ Jadeite ကျောက်စိမ်းသည် ရှားပါး၍ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည့်အပြင် အမြင်အားဖြင့်လည်း လှပသော ကျောက်စိမ်းအမျိုးအစားဖြစ်သည်။
ကျောက်စိမ်းကို ခရမ်းရောင်၊ မရမ်းရောင်၊ အနက်၊ အညို၊ အနီ၊ လိမ္မော်၊ အ၀ါ၊ အဖြူနှင့် အစိမ်းရောင်မျိုးကွဲ အမျိုးမျိုး တွေ့ရှိရသည်။ သံဓာတ်၊ မန်းဂနိဓာတ် အစရှိသည်တို့ ပါဝင်ပေါင်းစပ်မှုပေါ်တွင် မူတည်၍ အရောင်ကွဲပြားသွားရခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျောက်စိမ်း၏ အကောင်းဆုံးအရောင်ကို မြစိမ်းရောင်အဖြစ် သတ်မှတ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ ကျောက်စိမ်း၏တန်ဖိုးကို အရောင်အပြင် အလင်းပေါက်မှု အားနှင့်ပါ ဆုံးဖြတ်သည်ဟု ဆိုသည်။
တရုတ်ပြည်တွင် ကျောက်စိမ်းကို လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း ၄၀၀၀ ခန့်ကပင် ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ မာကျောမှုမြင့်မားခြင်းကြောင့် လက်နက်တန်ဆာပလာများအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ကြသည်ဟု ဖော်ပြကြသည်။ ကျောက်စိမ်းသည် ဂုဏ်သရေရှိခြင်း၊ မြင့်မြတ်ခြင်း၊ ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့် ပြည့်စုံခြင်း၊ တရားမျှတခြင်း နှင့် ဥာဏ်ပညာကြီးမားခြင်း စသည်တို့နှင် ပြည့်စုံသည့်ကျောက်အဖြစ် ယုံကြည်ကြ၍ အထူးတန်ဖိုးထား သုံးစွဲကြသည်။ အရောင်ပေါ်မူတည်၍လည်း ထူးခြားသည့် အာနိသင်နှင့်ဂုဏ်သတ္တိအမျိုးမျိုးရှိသည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ ထို့အပြင် ကျောက်စိမ်းသည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှင့် စိတ်ခံစားချက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကုထုံးများအတွက် ဆေးဘက်ဝင်ဂုဏ်သတ္တိရှိသည့် ကျောက်အဖြစ်လည်း သုတေသနမှတ်တမ်းများတွင် ဖော်ပြကြသည်။
အထူးသဖြင့် တရုတ်လူမျိုးတို့သည် ကျောက်စိမ်းကို အဆန်းတကြယ် ထွင်းထုကြသည့်အပြင် အမျိုးကွဲပေါင်း များစွာပြုလုပ်သုံးစွဲကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ ကျောက်စိမ်းသည် အေးမြသည့်သဘာဝရှိ၍ မကောင်းသည့် စွမ်းအင်များ၊ အစီအရင်များကို ဖယ်ရှားပေးခြင်း၊ ကျန်းမာသန်စွမ်းစေခြင်း၊ အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို တားဆီးပေးခြင်း၊ အသားအရေကြည်လင်တောက်ပစေခြင်း စသည်တို့ကြောင့် အဖိုးတန်လက်ဝတ်ရတနာအဖြစ်သာမက အဆောင်အယောင်အဖြစ်ပါ တန်ဖိုးထား ၀တ်ဆင်ကြသည်။
ကျောက်ကပ်နှင့် အသည်းရောဂါအတွက် အကျိုးပြုသည့်ကျောက်ဖြစ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်၏ PH level နှင့် ရေဓာတ်နှင့်ဆားဓာတ်ထိန်းညှိရာတွင် မလိုအပ်သည့် အဆိပ်အတောက်များ ဖယ်ရှားပေးနိုင်သည့် စွမ်းအင် လည်း ရှိသည်။
Where you can mostly find the best jade in the world is Myanmar. There are two different types of jade, Jadeite and Nephrite though it is generally called ‘Jade’. Among them, Jadeite is rare, elegant and super exceptional.
Jade can be found in different colours such as violet, magenta, black, brown, red, orange, yellow, white and variety of greens. Colours are ranging according to the combination of different mineral series.
Emerald green is ranked as the best colour of jade and the value of jade is also counted on the translucent level of stone. Jade was extensively using in China for 4000 years and also as the weapons according to its high hardness scale. Believing that jade stands for reputation, dignity, courageous, justice and wisdom, people use them as the special precious gemstone. ‘Jade’ also has individual outstanding powers according to its colour. Researches say that, jade has therapeutic properties for mental, emotional, spiritual and physical healings.
Especially, Chinese extensively sculpt jade in several different designs and used in different ways. Jade has cold texture and has the natural power of protection from negative energy and spells. People use and ware jade for its properties for health, skin and anti-aging. It is also said that jade is good for kidney, lever, detoxing and pH level balancing.
Author Kyaw LinnPosted on March 31, 2019 March 31, 2019 Categories Jade
Previous Previous post: ရွှေချည်ထိုး (Gold Embroidery)
Next Next post: အင်ကြင်းကျောက် (Petrified Wood)